आइपिएल बीचमै छोडेर अकस्मात नेपाल किन आए सन्दीप ? – जीवन शैली
आइपिएल बीचमै छोडेर अकस्मात नेपाल किन आए सन्दीप ?
Home /प्रमुख समाचार/आइपिएल बीचमै छोडेर अकस्मात नेपाल किन आए सन्दीप ?
भारतमा जारी विश्वकै सर्वाधिक ठूलो क्रिकेट लिग इन्डिनयन प्रिमियर लिग खेलिरहेका नेपाली क्रिकेट टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य एवं लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नेपाल आएका छन्। जारी खेलको बीचमा उनी व्यक्तिगत कामका लागि नेपाल आएका हुन्।
सन्दीप बुधबार नेपाल आएको उनका व्यवस्थापक रमन सिवाकोटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आफ्ना व्यक्तिगत काम पूरा गरेलगत्तै उनी भारत फर्किने छन्। के कामका लागि सन्दीप आइपिएलको जारी खेल छोडेर नेपाल आए भन्ने बारे उनी व्यवस्थापक सिवाकोटी खुल्न चाहेनन्।
दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपिएल खेलिरहेका सन्दीपले यो संस्करणको ५ खेलमा ८ विकेट लिइसकेका छन् । ११ खेल खेल्दा उनीले पाँच पटकमात्रै चान्स पाए भने छ खेलमा उनी बेन्चमै सीमित भएका थिए । दिल्लीले १२औं खेल आउँदो सोमबार रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरूविरुद्ध खेल्दै छ ।
गर्मी मौसममा शक्ति प्रदान गर्ने ५ तरकारी
सुन किन्दा के कुरामा ध्यान दिने
TAGS: सन्दीप लामिछाने